Nelson Chamisa Archives - The Zimbabwean Progressive
September 28, 2018 January 28, 2019 Obert Madondo
Zimbabwe security forces killed seven unarmed protesters in Harare just after the Southern African country’s first election without Robert Mugabe on the ballot. Nearly two months later, President Emmerson Mnangagwa’s Zanu PF government continues to persecute the opposition while proposing a post-Mugabe economy that favours unfettered global capitalism.
August 29, 2018 Zimbabwean Progressive
August 24, 2018 Obert Madondo
This week, Zimbabwe’s Constitutional Court heard the opposition MDC Alliance’s historic petition against the questionable results of the 2018 presidential election. In his challenge, opposition leader Nelson Chamisa argued that “gross irregularities” effectively invalidated the Zimbabwe Electoral Commission’s declaration of Emmerson Mnangagwa as the winner of the election.
August 12, 2018 August 22, 2018 Obert Madondo
Zimbabwe President-elect Emmerson Mnangagwa’s calculated post-2018 election terror campaign against the opposition MDC Alliance, which included the murder of six people people by the military, arbitrary arrests, and detentions, caught the world media’s attention.
ZEC “cooking” the results of Zimbabwe’s first post-Mugabe elections?
July 31, 2018 July 31, 2018 Obert Madondo
The Zimbabwe Electoral Commission has delayed announcing the outcome of Zimbabwe’s first post-Mugabe elections, raising opposition fears that the commission is trying to manufacture victory for President Emmerson Mnangagwa and the ruling Zanu PF party.